Vaovao - inona no sucralose
inona ny sucralose
Fanovana maimaim-poana ny Sucralose hanampiana ny fahatsapana ilay anarana
Ity fidirana ity dia nomen'ny tambajotra mobei.
Sucralose (TGS) dia mpamatsy vaovao novokarin'i Tate & Lyie sy oniversite London ary nahazo patanty tamin'ny 1976. Splenda no hany mpanam-penina miasa mifototra amin'ny sukrosa, marika Splenda voalohany, izay in-600 heny noho ny sukrosa. Ity mpamanamana ity dia tsy manana angovo, mamy avo, mamy madio, fiarovana avo lenta ary toetra hafa. Izy io dia iray amin'ireo mamy mahomby indrindra.
Sucralose na TGS CNS: 19.016; INS: 955), fantatra koa amin'ny anarana hoe Sucralose, sukrosa na 4, 1, 6, -trichloro-4, 1, 6, -trideoxygalactose sukrosa, anarana anglisy: Sucralose. Ny Sucralose dia voaomana amin'ny sucrose amin'ny alàlan'ny chlorination. Ny formula molekiola dia C12H19Cl3O8 ary ny lanjan'ny molekiola dia 397.64.
1 Fampahalalana fototra
2. Tahirin-kevitra ara-batana
Fomba fitehirizana 3
Fomba 4 synthesis
Fampiasana 5 lehibe
Tahirin-kevitra toksika 7
Data momba ny simika 8
9 Data momba ny tontolo iainana
Aforeto mba hanovana ity fizarana fampahalalana fototra ity
Anarana sinoa: sucralose
Anarana anglisy: Sucralose
Anaram-bosotra sinoa: sucralose
CAS tsia. : 56038-13-2
Milanja molekular: 397.6335
Aforeto mba hanitsiana an'io fizarana data io
1. Toetra: Fotsy amin'ny vovoka kristaly saika fotsy, tsy misy fofona, tsy hygroscopic. Density (g / mL, 15ºC): 1.357
3. Vonim-pifandraisana: 1.66 (20ºC)
Teboka mitsonika (lo)
Teboka (ºC): 104-107
Teboka (ºC, 0.5mmHg): tsy voafaritra
7. Fanondroana refraktika: tsy voafaritra
8. Teboka (° F): tsy voafaritra
9. Fanodinana optique manokana (ºC): tsy voafaritra
10. Teboka fandrehitra na mari-pana (ºC) tampoka: tsy voafaritra
11. Tsindry etona (kPa, 25ºC): tsy voafaritra
12. Tsindry etona mifatotra (kPa, 60ºC): tsy tapa-kevitra
13. Hafan'ny fandoroana (KJ / mol): tsy voafaritra
14. Temperature kritika (ºC): tsy voafaritra
15. Tsindry fanakianana (KPa): tsy voafaritra
16. Tombam-bidin'ny lozisialy ny rano-oktanol (oktanol / rano) coefficient fisarahana: tsy voafaritra
17. Fetran'ny fipoahana ambony (%, V / V): tsy voafaritra
18. Ferana ambany amin'ny fipoahana (%, V / V): tsy voafaritra
19. Solubility: mora levona amin'ny rano, etanol ary methanol, mety levona kely amin'ny ether.
Ampidino ity fomba fitahirizana fizarana ity
Kitapo plastika misy sakafo sy kitapo taratasy kraft. Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina
Aforeto ity fomba syntheta fizarana ity
1. Amin'ny fampiasana sukrosa ho akora fototra, ny sucralosucrose dia azo tamin'ny Triphenylmethylation (miaro vondrona hydroxyl telo voalohany), acetylation (miaro vondrona hydroxyl faharoa ambaratonga faharoa), fanesorana triphenylmethyl, fifindra-monina vondrona acetyl, chlorination, deacetylation, sns.
Misy fomba telo fanomanana sucralose: fomba ester tokana, fomba enzim-simika ary fomba famindrana vondrona. Ireo fomba roa voalohany dia miaro vondrona hydroxyl sasany fotsiny, ka ny haavon'ny fanoloana dia tsy azo fehezina mandritra ny chlorination, ary ny vokatr'izany dia mifangaro, indrindra ny fomba ester tokana dia mety hiteraka ny famotehana ny sukrosa hamoaka estera fructose. Na izany aza, ny fomba fifindra-ponan'ny vondrona dia miaro vondrona hydroxyl marobe am-piandohana, hany ka mitongilana ny fihetsiky ny chlorination, ary vokatra azo somary tokana no azo raha tsy misy teknolojia fisarahana manokana, miaraka amin'ny vokatra hatramin'ny 36%.
Sucralose dia zava-mamy ankasitrahana ao Shina. Ny hamamiany dia manodidina ny in-600 eo ho eo amin'ny sukrosa, ary madio ny tsirony mamy. Ny toetrany mamy sy ny kalitaony mamy dia mitovy amin'ny sukrosy. Amin'ny ankapobeny ny fizotran-tsakafo sy ny fitehirizana ny fizotran'ny sakafo dia tena marin-toerana, tsy voavahan-drano, mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Ny fitsipi-pifehezana an'i Shina dia azo ampiasaina amin'ny fisotroana, pickles, zava-pisotro misy alikaola, divay, gilasy, mofomamy, biskoitra, mofo ary saha maro hafa.
Aforeto ary amboary ny laharan'ny rafitr'ity fizarana ity
Laharana MDL: MFCD03648615
Laharana RTECS: LW5440140
Laharana BRN: 3654410
Aforeto ary amboary ity fizarana data data toksika ity
1. Toetrisetra: LD50 (totozy, am-bava) 16g / kg (BW); (Voalavo, am-bava) 10g / kg (bw).
Aforeto mba hanitsiana an'ity fizarana ny angona simika ity
1, sanda momba ny kajikajy hydrophobic parameter (XlogP): -1.5
2. Isan'ny mpamatsy hidrôzenina: 5
3. Isan'ny receptor hydrogen bond: 8
4. Isan'ny fatorana azo ahodina: 5
5. Isan'ny tautomera:
6. Faritra ambonin'ny mololozika topoloola (TPSA): 129
7. Atoma mavesatra: 23
8, fiampangana ambony: 0
9. Fahasarotana: 405
10, isa atômika isôtika: 0
11. Tadiavo ny isan'ny ivon'ny rafitra atomika: 9
12. Isan'ny ivon-toeran'ny atomika tsy azo antoka: 0
13. Fantaro ny isan'ny foiben'ny firafitry ny fatorana simika: 0
14. Isan'ny ivon-toeran'ny rafitra tsy azo antoka: 0
15. Isan'ny singa mifamatotra kojakoja: 1
Aforeto mba hanovana ity fizarana data ity
Aza avela hifandray amin'ny rano ambanin'ny tany, ny lalan-drano na ny rafitra maloto ny vokatra tsy misy loto na be dia be ary aza manary fitaovana amin'ny tontolo manodidina raha tsy mahazo alalana avy amin'ny governemanta.
Aforeto ity fizarana fananana ity
Tsy mamaivay raha ampiasaina sy tehirizina arakaraka ny masontsivana ary tsy misy fanehoan-kevitra mampidi-doza fantatra
Kaody fadin-tseranana: 2932999099
Kaody kilasy loza: R36 / 37/38
Famaritana momba ny fiarovana: 26-37 / 39
Famantarana ireo entana mampidi-doza: Xi: Tezitra;
Data momba ny fadin-tseranana
China Customs (2932999099)
Topimaso 2932999099. Fangaro heterôklika hafa izay misy atôma heterô ihany. Tahan'ny VAT: 17,0%. Taham-pahafahana: 13,0%. Fepetra fanaraha-maso: Tsy misy. Tarifan'ny MFN: 6,5%. Tariff ankapobeny: 20,0%
Hetsika heterôklika hafa amin'ny Oxygen Hetero-Atom (s) ihany. VAT: 17,0%. Taham-pividianana haba: 13.0% .. Fifandraisana amin'ny MFN: 6,5% mifandraika amin'ny varotra ankapobeny: 20.0%
Làlan'ny synthesis (9 amin'ny fitambarany)
Sucrose - estera 6-etil
Vokatra ambony sy ambany
Vokatra miakatra (10 ny totaliny)